Sarintany ifarimbonana lasa fitaovana hiadiana amin’ny heloka bevava ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2018 13:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, македонски, 日本語, čeština , عربي, Ελληνικά, Español
Any Meksika, tsy dia zava-baovao ny olan'ny fiarovana -samy milaza ny fitomboan'ny fandikan-dalàna heloka bevava avokoa ny tatitra an-gazety, ny antontanisa sy ny fomba fijery ankapobeny. Manoloana io toe-javatra io, izay indraindray tsy voafehin'ny sampan-draharaham-panjakana tokony hisahana izany, dia nitodika tamin'ny teknolojia fandraketana an-tsarintany ireo olom-pirenena tsotra ao Mexico City mba hiezaka hampihena ny fiantraikan'ny heloka bevava ao amin'ny vondrom-piarahamoniny.
Araka ny tatitra iray momba ny fandikan-dalàna heloka bevava tao an-drenivohitra tamin'ny tapany faharoan'ny taona 2018, Mexico City no tanàna faharoa nahitana tranga betsaka indrindra amin'ny halatra mahery vaika tao amin'ny firenena. Izy ihany koa no laharana fahatelo tamin'ireo fanjakana 32 amin'ny resaka fandrobàna an-dalambe ary fahafolo amin'ny vaky trano. Ireo antontan'isa ireo dia ahitana halatra miharo herisetra 96, halatra fiara 27, vaky trano 20, fandrobàna orinasa 44 ary fandrobàna 40 isan'andro.
Tsy zava-baovao ny tetikady mampiasa fampiharana toerana jeografika ho fitaovana hiadiana amin'ny heloka bevava. Hatramin'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2016, nanangona vaovao momba ireo karazana heloka rehetra isaky ny tanàna ny tranonkala Hoyo de Crimen. Azo tamin'ny alalan'ny fangataham-baovao tamin'ny sampam-piarovana ao amin'ny renivohitra Meksikana ireo tranga heloka bevava. Ity tetikasa manokana ity dia nahitana fandraketana hetsika toy ny fanafihana, fangalarana fiara ary famonoan'olona, ​​ankoatra ny hafa. Noforonin'ilay programera Diego Valles ny tetikasa ary notohizan'i Carlos Castañeda, izay nanoratra momba izany tao amin'ny u-GOB, tranonkala natokana ho fampiasana ny teknolojiam-pitantanana. Ao amin'ny lahatsoratr'i Castañeda, maneho hevitra ny fomba ahafahan'ny tetikasany manampy ny olona hisoroka ny loza ao an-tanàna i Valles:
Nampiasa ny tetikasa sarintany ihany koa ireo mpianatra jeografia ao amin'ny Oniversite Nasionaly mahaleotena ao Meksika (UNAM) mba hanara-maso sy hiampanga izay heloka ao anatin'ny tobin'ny oniversite. Nangonina tamin'ny alalan'ny fanadihadiana an-tserasera tsy mitononaa anarana izay nozaraina ampahibemaso tao amin'ny Facebook ny tahirin-kevitra. Ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny Facebook, mpianatra iray no manazava fa ny fanadihadiana sy ny sarintany dia mikendry ny “hampiseho ireo toerana misy ny herisetra ao amin'ny tobin'ny oniversite”. Manondro ny vondron'ny mpianatra manafintohina, fantatra amin'ny anarana hoe porros, izay efa tratran'ny fiampangana herisetra nandritra ny hetsi-panoherana milamina nandritra ny taona maro tao amin'ny UNAM ihany koa ny lahatsoratra.
Ny tetikasa fandraketana an-tsarintany ao Meksika dia tsy voafetra ho amin'ny fanafihana ny mpandeha an-tongotra na halatra fiara ihany. Hatramin'ny taona 2016, namokatra sarintany ifarimbonana andraketana ireo famonoana vehivavy manerana ny firenena ny vehivavy mpandrafitra fampiharana (developera) iray miasa eo ambadiky ny solonanarana ho fiarovana azy manokana.